गर्भवती र गर्भधारण गर्न चाहने महिलाले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनु कति उचित ? | Hamro Doctor News
By Dr. Mala Shrestha
कोरोना महामारीको सुरुवातदेखि गर्भवति महिला वा गर्भधारण गर्न चाहने महिलाहरु बढी चिन्तित थिए । आफू कोरोना संक्रमित भएको अवस्थामा के हुन्छ ? के गर्भमा रहेको बच्चा खेर जान्छ वा के गर्भको बच्चामा पनि कोरोना संक्रमण हुन सक्छ ? जस्ता अनेक प्रश्नहरु उब्जेको थियो । यस्तै गर्भधारण गर्न हुन्छ कि हुँदैन ? गर्भधारणपछि कोरोना संक्रमण भयो भने के हुन्छ ? जस्ता प्रश्नहरु अझैपनि कतिपय महिलाहरुले डाक्टरहरुलाई गरिरहेका छन् ।
यस्तै कोरोना महामारीबाट जोगिने एक मात्रै विकल्प कोरोनाविरुद्धको खोप हो । खोप अहिले पालैपालो सबैले लगाउन थालेका छन्, तर १८ वर्षभन्दा माथिकाले मात्रै । कोरोनाविरुद्धको खोपलाई लिएर पनि गर्भवति महिला र गर्भधारण गर्न चाहने महिलाहरु चिन्तित छन् । खोप लगाउने कि नलगाउने ? लगाउँदा के हुन्छ ? जस्ता प्रश्नहरुका कारण । गर्भवति महिला र गर्भधारण गर्न चाहेन महिलाहरुका यी प्रश्नहरुको उत्तर विश्व स्वास्थ्य संगठनसहित विश्वका विभिन्न मुलुकमा भएको अध्ययन र अनुसन्धानले समाधान गरिसकेको छ ।
भारत, बेलायत, अमेरिका लगायतका विश्वका विभिन्न मुलुकले गर्भवति महिला र गर्भधारण गर्न चाहने महिलाहरुले पनि निर्धक्कसाथ कोरोनाविरुद्धको खोप अब लगाउन सक्छन् भने स्पष्ट पारिसकेका छन् ।
ईशाल बाल तथा महिला अस्पतालकी स्त्री तथा प्रसुति रोग विशेष डा.माला श्रेष्ठले गर्भवति महिला र गर्भधारण गर्न चाहने महिलाहरुले कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउन मिल्ने वा नमिल्ने प्रश्न र जिज्ञासालाई प्रष्ट पार्दै यसो भन्छिन् :
गर्भवति महिलाले निर्धक्कसँग कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदा हुन्छ
गर्भावस्तामा गर्भमा रहेको बच्चामा कोरोनाविरुद्धको खोपले कुनै असर हुँदैन
गर्भवति महिला जो मधुमेह, मुटुरोगी र रक्तचापका रोगीहरु छन् उनीहरुले अनिवार्य खोप लगाउनु पर्छ
सामान्यतया गर्भवति महिलाले आफ्नो चिकित्सकसँग परामर्श गरेर खोप लगाउँदा हुन्छ
यस्तै स्तनपान गराइरहने महिलाले पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउँदा हुन्छ
स्तनपान गराइरहने महिलाले खोप लगाएपछि रोग प्रतिरोधात्मक क्षमता वृद्धि हुने र एन्टीबडी बन्ने र त्यो बच्चामा पनि जाने हुँदा बच्चालाई पनि कोरोनाको संक्रमणबाट जोगाउन सकिन्छ
गर्भधारण गर्न चाहने महिलाले कोरोना खोप दुबै मात्रा लगाएर वा एक डोज लगाएपनि केहि नराम्रो हुँदैन
कोरोना संक्रमित भइसकेको महिलाहरुले पनि कोरोनाविरुद्धको खोप लगाउनु पर्छ
Last modified on 2021-07-22 16:56:37